Waxaa kaa Maqan 3 ka mid ah 5 dareen oo ku saabsan aragtidaada ah | Martech Zone
Waxaad ka maqantahay 3 ka mid ah 5 dareen oo ku saabsan sameynta aragti
Jimcaha, Agoosto 22, 2014 Khamiista, Febraayo 25, 2021 Douglas Karr
Waxaan ka soo qaybgalay xaflad daahfurka dhowaan ah oo daabacaadda daabacan oo keliya ah oo ku saabsan dhaqanka cuntada ee Gobollada Dhexe. Markii aan lahadlayay kooxdii abuurtay, waxaa jiray sharaf aad uwanaagsan oo ka kooban labada nuxur, farshaxanka, iyo badeecada dhammaatay. Joornaalku wuxuu ahaa mid adag waxaadna dareemi kartaa tayada warqadda, waxaad uraysaa daabacaadda cusub, iyo ku dhowaad dhadhamiya cuntada sida aadka ah loogu sharraxay joornaalka.
Waxay igu kaliftay inaan bilaabo inaan ka fikiro waxyaabaha ku kalifay suuqleyda inay baxaan. Waxaan maalmahan u xirnayn warbaahinta dhijitaalka ah qiimaha jaban iyo awoodaha tiknoolajiyada oo aan ilaawno in dadka intiisa badani ay kaliya ku arkaan wixii aan ku sameynay qoraalka iyo sawirada. Haddii aan kor u qaadno darajo, waxaan ku sameyn karnaa fiidiyoow meeshii ay hadda awoodaan arki iyo maqashiin anaga Laakiin taasi weli waa kaliya 2 ka mid ah 5 dareen ee aan awoodno inaan gaarno.
Haddii aad rabto in aad kobci hoggaanka, maahan oo kaliya in lagu riixo emayl kale sanduuqooda. Waxaad ubaahantahay inaad gaarto hogaamintaas oo aad sameyso aragti haddii aad rabto inaad ku kaxeyso iyaga si aad uqaado talaabada xigta ee ku aadan wax iibsiga, dib u saxeexida qandaraaska, ama kordhinta qarashka ay ku bixinayaan ururkaaga.
Sideed ku gaari kartaa dareenka intiisa kale - taabasho, ur, iyo dhadhamin - in laga tago raad raaga? Haddii aad isku magaalo joogto, waxaa laga yaabaa inay u fududahay sidaad u qaadan lahayd rajadaada ama macmiilkaaga si aad u cashooto Laakiin qaar badan oo naga mid ahi waxay ka shaqeeyaan meel ka baxsan darawalnimada marka xulashooyinka ayaa xoogaa xaddidan. Waxaa laga yaabaa inaad yeelan karto badeecad caado loo soo saaray ama nuqul daabacaad qurux badan leh. Waxaa laga yaabaa inaad ku dari karto dhalo khamri ah ama macmacaan maxalli ah oo lagu soo diro boostada.
Wixii caado u ahaan jiray hadda waa dhif iyo naadir - iyagoo tilmaamaya fursad aan caadi aheyn oo aad iskaga sooci karto tartankaaga. Maxaad sameyn kartaa si aad raad reeb ah ugu reebato taabashada, urta, iyo dhadhanka?
Tags: 5 dareenjiilka hogaaminta b2bxiriirka macmiilkaxiriirka macmiilkamaqashiinhagaajinta barbaarintamarketingkobcintaarkidareennadaurindhadhantaabto
Riffle: Hel Kumbuyuutarka Tilmaan-bixiyaha 'Chrome Now'!
MobileAppTracking: SDK loogu talagalay ku rakibida moobiilka